Hlola iinqununu ezili-10 eziphezulu kakhulu ngeDitha
Iinkwenkwezi ziibhola ezinkulu ze-plasma. Nangona kunjalo, ngaphandle kwelanga, zibukeka njengezinto ezincinci zokukhanya esibhakabhakeni. Ilanga lethu aliyona inkwenkwezi enkulu okanye encinane kunazo zonke kwindalo . Ngokwenene, kuthiwa yi-yellow dwarf. Kukhulu kunabo bonke iiplanethi ezidibeneyo, kodwa kungabi nakwizinga eliphakathi kwemilinganiselo yazo zonke iinkwenkwezi. Kukho ezininzi ezininzi kwaye zikhulu kuneLanga. Ezinye zikhulu kuba ziye zaguquka ngaloo ndlela ukususela kwixesha apho zenziwe khona. Ezinye zikhulu kuba zikhula kwaye zikhula njengoko zikhula.
Ubunzima beNkwenkwezi: I-Target Target
Ukulinganisa ubungakanani beenkwenkwezi akuyona iphrojekthi elula. Akukho "ubuso" njengokuba sibona kwiiplanethi ukunikela "umda" onzima kumlinganiselo. Kwakhona, izazi zeenkwenkwezi abanalo "ulawulo" olufanelekileyo abanokuzibamba ukuze benze imilinganiselo. Ngokuqhelekileyo, banokukhangela inkwenkwezi kwaye balinganise ubungakanani "obunzima", obuthetha ububanzi bayo njengoko kulinganiswe kwiidridi okanye ama-arcminutes okanye i-arcsecond. Oko kubanika ingcamango jikelele, kodwa kukho ezinye iimeko zokuqwalasela. Ezinye iinkwenkwezi ziyahluka, umzekelo. Oko kuthetha ukuba bahlala banda kwaye behla xa ukukhanya kwabo kuguquka. Ngoko, ukuba izazi zeenkwenkwezi zifunda inkwenkwezi njengeV838 Monocerotis, kufuneka zijonge kangangoko kwixesha elide njengoko likhula kwaye lihla. Emva koko banokubala ukuba "ubukhulu" bukhulu. Njengazo zonke izilinganiso zeenkwenkwezi, kukho inqobo yephutha ekuqwalaselweni ngenxa yesiphelo sempazamo, umgama kunye nezinye izinto. Ekugqibeleni, uludwe lweenkwenkwezi ngobukhulu kufuneka luqwalasele ukuba kukho iindawo ezinkulu ezingakhange zifundwe (okanye zifunyenwe) okwamanje. Ngaloo nto engqondweni, yiziphi iinkwenkwezi ezizona zikhulu kunazo zonke ezaziwa ngabafundi beenkwenkwezi?
I-Credit Credit: NASA, ESA
I-betelgeuse yaziwa ngokuba yindoda ebonakalayo kwaye ibonwa lula kwi-night night sky ukusuka ngo-Oktobha ukuya kuMatshi. Kuyaziwa ukuba ne-radius ngaphezu kwamawaka aphindwe ngamawaka e-Sun kwaye yayaziwa kakhulu yimibala ebomvu. Oku kuyingcipheko ngenxa yokuba kwi-640 yokukhanya-iminyaka ukusuka ku-Earth, iBelgegeuse isondele kakhulu xa kuthelekiswa nezinye iinkwenkwezi kuleluhlu. Kwakhona, uhlala kwindawo edumileyo kuyo yonke iinqununu, i-Orion. Le nkwenkwezi enkulu iphakathi kwe-950 kunye ne-1,200 yeer radii kwaye kulindeleke ukuba ihambe i-supernova nayiphi na ixesha. Kaninzi "
Tim Brown / I-Bank Image / Getty Izithombe
Lo mnyama obomvu uphakathi kweenkwenkwezi ezaziwa kakhulu kwi-galaxy yethu. I-radius eqikelelwayo phakathi kwama-1,800 kunye nama-2,100 amaxesha e-Sun. Kulobukhulu buza kufinyelela phantse kwi-orbit yeSaturn xa kufakwa kwi -system yethu yelanga . I-VY Canis Majoris ifumaneka malunga nama-3,900-iminyaka ukusuka kuMhlaba ukuya kwicala leCellis Majoris. Ngenye yeenkwenkwezi eziguquguqukayo ezivela kwiQinell Major Canis.
Ilanga lethu lifaniswa neenkwenkwezi ezinkulu zeVV Cephei A. Foobaz / Wikimedia Commons
Le nkwenkwezi ikhona kwicala leCefeus ye-constellation, malunga neminyaka eyi-6,000 yokukhanya evela eMhlabeni. Inkwenkwezi ebomvu engqambileyo eqikelelwe ukuba ijikeleze iwaka eliqhelekileyo iRausus. Ngokwenene inxalenye yenkwenkwezi yenkwenkwezi yenkomfa; iqabane layo liyingcali encinane yebhakabhaka. Imijikelezo emibini yomnye nomdaniso obunzima. Akukho maplanethi afunyenwe kule nkwenkwezi. Igama le-A kwigama leenkwenkwezi linikezelwa kwiyona nto inkulu yebini, kwaye ngoku iyaziwa njengenye yeenkwenkwezi ezinkulu kwiMilky Way.
Umbono womculi wendlela uMu Cephei angabonakala ngayo. Wikimedia Commons
Lo mnyama obomvu eKepheus ungama-1,650 ngamaxesha e-Sun. Kwakhona enye yeenkwenkwezi eziqhakazile kwiMilky Way , kunye namaxesha angaphezu kwama-38,000 amaxesha okukhanya kwelanga . Kwakhona inegama lomnxeba "I-Garnet Star" yeHerschel ngenxa yombala wayo obomvu obomvu.
I-V838 i-Monocerotis kwimodi yayo yokugquma, njengoko ibonwa yi-Hubble Space Telescope. NASA kunye ne-STScI
Le nkwenkwezi ebomvu ebonakalayo ekhokelwe kwinqanaba leMonoceros lilinganiselwa kwiminyaka engama-20,000 ekhanyayo evela eMhlabeni. Ingaba inkulu kunokuba i-Mu Cephei okanye iVV Cephei A, kodwa ngenxa yobude bayo ukusuka kwi-Sun, ubungakanani bayo obukhulu kunzima ukuyiqonda. Kwakhona, iphosa ngobukhulu, kwaye emva kokugqitywa kwayo kokugqibela ngo-2009, ubukhulu bayo obubonakalayo buncinane. Ngako oko uluhlu luqhutywa ngokubanzi phakathi kwama-380 kunye ne-1,970 yelanga.
I- Hubble Space Telescope iye yaqwalasela le nkwenkwezi ngezihlandlo eziliqela, ibhala ingqungquthela yothuli olufuduka kuyo.
Umbono womculi wohlu lwe-WOH G64 kunye ne disk yayo ebonakalayo. I-European Obervatory Obervatory.
Lo mngcipheko obomvu ohlala kwi-constellation yaseDorado (kwiindawo ezisemazantsi esezulwini), malunga nama-1,540 ngamaxesha e-Sun. Eyona nto ikhona ngaphandle kweGileky Way Galaxy kwiGall Magellanic Cloud . Lona ngumlingani osondeleyo kunye nathi kunye no-170 000-iminyaka-engama-400.
I-WOH G64 inesidiski esidibeneyo segesi kunye nothuli olujikelezile. Le nto ibonakala ikhutshwe kwi nkwenkwezi njengoko iqala ukubola kwayo. Le nkwenkwezi yayisetyenziswe ngamaxesha angaphezulu kwama-25 ubukhulu beSanga, kodwa njengoko isondela ukuqhuma njenge-supernova, yaqala ukulahlekelwa ngumzimba. Izazi zeenkwenkwezi ziqikelela ukuba zilahlekelwe izinto ezifanelekileyo ukwenzela ukuba zenze iiprogram ezintathu zesithoba.
Kancinci kuncinci kune-WOH G64, lo mnyama obomvu yi-1,520 i-radii yelanga. Kwiminyaka eyi-9,000 yokukhanya okuvela eMhlabeni, iV354 Cephei ifumaneka kwiCeleph de constellation. Kuyinto engatshintshiyo, oko kuthetha ukuba ityhutyha kwishedyuli ethile. Izazi zeenkwenkwezi ezifunda le nkwenkwezi zijonge ukuba ziyingxenye yeqela elikhulu leenkwenkwezi ezibizwa ngokuba ngumbutho weCepheus OB1, kunye neenkwenkwezi ezininzi ezitshisa kakhulu, kodwa kunye nenani labantu abapholileyo njengolu.
Umbono we-RW Cephei (phezulu ngakwesokudla) ukusuka kwi-Sloan Digital Sky Survey. SSDS
Nantsi enye ingeniso esuka kwiCelephus ye - constellation , esibhakabhakeni esenyakatho ye-hemisphere. Le nkwenkwezi ingabonakali yonke into enkulu kummandla wayo, kodwa ayingabanye abaninzi emlonyeni wethu okanye kwiindawo ezikufutshane ezinokuyilwa. Lo mhlaba obomvu ubanzi kwindawo ethile engama-1,600 i-radii yelanga. Ukuba yayisendaweni yeSelanga, umoya wayo wangaphandle wawuza kululeka ngaphezu kwe-Jupiter.
I-KY Cygni ubuncinane ama-1,420 ngamaxesha e-Sun, kodwa ukulinganisela okubangela ukuba kube ngaphezu kwe-2,850 ye-radii. Kusenokwenzeka ukuba sisondelene nobukhulu obuncinci. Itholakala malunga ne-5,000-iminyaka yokukhanya evela eMhlabeni kwi-Cygnus yeenkell. Ngelishwa, akukho mfanekiso omuhle okhoyo kule nkwenkwezi ngeli xesha.
Ukumela i-Sagittarius ye-constellation, lo mnyama obomvu awukho i-slouch kumaxesha angama-1,460 i-radius ye-Sun yethu. Ukuba bekuyiyona nkwenkwezi eyona nto yesimiso sethu sobusuku, iyakulula ngokugqithiseleyo ngaphesheya kwe-Mars. I-KW Sagittarii ineminyaka engama-7,800 ukukhanya kude nathi. Izazi zeenkwenkwezi ziye zalinganisa ukushisa kwayo, ejikeleze ama-3700 K. Oku kupholile kunelanga, elingama-5778 K ebusweni. Akukho mfanekiso omuhle okhoyo kule nkwenkwezi ngeli xesha.
Ihleliwe kwaye ihlaziywe nguCarolyn Collins Petersen.
IPluto ISIHLABA ESIBHILE!
Ababulali bakaNkosana II waseRashiya kunye neNtsapho yakhe
Indlela yokusebenzisa iSpanish 'Cuando' njengeNgqungquthela